Kenya oo markale la "weeraray", 18 Qof oo la dilay | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo markale la “weeraray”, 18 Qof oo la dilay
Lamu (KON) - Ugu yaraan 18 Qof ayaa lagu dilay Weerar markale Xalay ka dhacay dalka Kenya, kaasi oo noqonaya kii 2-aad oo dalkaasi ka dhaca Mudo ka yar Hal Bil, iyadoo Amni darrada Jilbaha dhulka u dhigay Dhaqaalaha Dalxiiska kasoo galayay dalkaasi.
Koox hubaysan oo gaaraya 15 Qof ayaa Xalay Weeraray Magaalooyinka Hindi & Gamba, halkaasi oo ay ku toogteen Dad u badan Shacab, sida uu sheegay Gudoomiyaha Deegaanka Lamu Njenga Miiri.
Madaxa Hay'adda Bisha Cas ee Kenya, Abbas Gulet ayaa sheegay in 4 Qof lagu dilay Goob Ganacsi oo ku taalla Deegaanka Hindi, oo ka tirsan Degmada Lamu oo ah Halkii uu dhacay Weerarkii Bishii lasoo dhaafay ee lagu dilay 65 Qof.
Sagaal kale, oo 5 kamid ah ay ahaayeen Maxaabiis ayaa lagu dilay Weerar isna ka dhacay Xalay Saldhiga Booliska Deegaanka Gamba oo kamid ah gobolka Tana River, waxaana Labada Weerar sheegtay Mas'uuliyadooda Kooxda Al shabaab-Al Qaeda. Sarkaal Boolis ayaa ku jiray Dadka la dilay, waxaana la sheegay in kuwa Weerarka geestay ay ku baxsadeen Baabuurta Ciidanka Kenya.
"Kuwii fuliyay Weerarada ka dhacay Kenya Xalay si Nabad ah ayay dib ugu soo laabteen Soomaaliya, kadib markii ay dileen ugu yaraan 10 Qof," sidaasi waxaa yiri Sheekh Abdulaziz Abu Musab, Afhayeenka dhanka Howlagallada Al shabaab.
Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay meel 15Km u jirta Lamu oo ah Degmo ku taalla Xeebta dalkaasi Kenya, kuna dhaw Soomaaliya, iyadoo Al shabaab ay sidan oo kale uga geesteen halkaasi Weeraro Dad badan ku dhinteen.
Deegaanka Hindi waxa uu 40 kilometers (25 miles) dhanka Waqooyi ka xigaa Magaalada Mpeketoni. Sidoo kale Gamba ayaa ku dhowaad 70 kilometers (43 miles) dhanka Waqooyi Galbeed u jiraa Mpeketoni.
Kenya waxaa ka dhacayay Weeraro tan iyo 2011 markaasi oo ay Ciidamadeeda ka tallaabeen Xadka Soomaaliya, si ay ula dagaalaam Kooxda Al Shabaab oo ay ku eedeysay Xumuumadda Nairobi Afduubka Shaqaale Hay'ado Ajanabi ah & Dilka Saraakiil ka tirsan Ciidankeeda.